Arthralgia - लक्षण
arthralgia - द्वारा accompanied छ र जोडों पीडा भरेको छ कि एक रोग। यो सुविधा संयुक्त क्षति को कुनै संकेत छन् छ। रोग arthralgia विशेषताहरु गठिया वा पुराना ओस्टियोआर्थराइटिस - पहिलो, तपाईं arthralgia अन्य संयुक्त रोगहरु एक harbinger अक्सर के विचार गर्न आवश्यक छ। अन्य अवस्थामा, रोग जोडहरुको को हार द्वारा accompanied छैन जो एक विशिष्ट विज्ञान, छ। वर्गीकरण र arthralgia जोडों को लक्षण arthralgia लक्षण राम्ररी प्रजाति arthralgia सम्बन्धित छन्। arthralgia गर्न चिकित्सा निदान को विशेषज्ञ को कार्यालय मा जवाफ गर्नुपर्छ भनेर निम्न विवरण उल्लेख गर्न आवश्यक छ: दुखाइ को स्थानीयकरण;
कार्ड एकप्रकारको तन्त्रमन्त्र
धेरै शताब्दीअघि लागि, कार्ड एकप्रकारको तन्त्रमन्त्र आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाउन छैन। विश्वास वा छैन परिणाम - आफ्नो सही, तर तपाईं नक्सा शक्ति शङ्का पनि भने, तपाईं बस मजा विभिन्न रूपरेखा प्रयोग गरेर आफ्नो अवकाश समय खर्च गर्न सक्छन्। कार्ड संग तपाईं एक पारिवारिक जीवन, क्यारियर वा सम्बन्ध मा तपाईं पाउनेछन् के बाहिर पाउन सक्छन्। यस लेखमा हामी तपाईं संग सरल कार्ड एकप्रकारको तन्त्रमन्त्र साझेदारी हुनेछ। कार्ड एकप्रकारको तन्त्रमन्त्र प्रेम यो 36 कार्ड एक डेक प्रयोग लोकप्रिय प्रेम एकप्रकारको तन्त्रमन्त्र छ। , डेक लिनुहोस् राम्ररी कार्ड अनियमित। आफ्नो बायाँ हात संग, शीर्ष कार्ड हटाउन र त्यसपछि राजा खोज्न - यो कुनै गरेको अनुमान छ। तपाईं पनि पंक्तिबद्ध एक महिला बनाउन सक्छ। अब लुकेका व्यक्ति को रंग परिभाषित: स्नातक - हीरे राजा;
मिति गर्न, रूसी जोडे हजारौं निष्फलता संग संघर्षरत। केही लागि, यो प्रक्रिया पहिले नै विजय मा समाप्त भएको छ - लामो-पर्खिरहेका बच्चा अरूलाई - सबै अझै पनि अगाडी। आईवीएफ - यिनी विट्रो मा मल को एक व्यापक विधि छ सक्छ यो अवस्थामा मदत गर्न। तर यसरी एक बच्चा कल्पना गर्नु गर्न चाहने सामना गर्नुपर्ने मुख्य समस्या, उपचार को उच्च लागत छ। सबैले कुनै पनि गारंटी दिन छैन जो महंगा प्रक्रिया, खर्च गर्न सक्छन्। तर 2013 मा, धेरै रूसी नागरिक त्यहाँ आशा छ -। अनिवार्य चिकित्सा बीमा को नीति अन्तर्गत आईवीएफ मौका आनन्द "परीक्षण-ट्यूब" मा यिनी विट्रो मल - निष्फलता लागि सबैभन्दा लोकप्रिय उपचार को छ। विधि पहिले बेलायत मा 1978 मा प्रयोग गरिएको थियो र गर्न मिति जोडे हजारौं आनन्दित आमाबाबुले बन्न मदत छ। आईवीएफ एक महंगा प्रक्रिया छ, र पहिलो प्रयास संग सफलता को कुनै ग्यारेन्टी छ। यो क्लिनिक अनुसार रूस मा लागत विधि 100 देखि 300 thous गर्न भिन्न। Rubles। एक औसत आय संग एक परिवारको लागि राम्रो बरु ठूलो राशि सहमत। र परिणाम सधैं पहिलो समय पछि सकारात्मक छैन भन्ने विचार, ईसीओ वही मुसीबत कुरा हुन्छ। कृत्रिम insemination शायद सबैभन्दा सफल र खोजे-पछि फर्टिलिटी उपचार को एक, र केही लागि छ - मात्र। त्यसैले, मातृत्व आईवीएफ को transcendental आनन्द को मूल्य रूसी महिला हजारौं deprives। को MLA मा आईवीएफ कार्यक्रम अक्टोबर 22, 2012 एक मुक्त आईवीएफ समावेश जो अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा, एक ड्राफ्ट कार्यक्रम हस्ताक्षर। जनवरी 1, 2013 देखि प्रत्येक infertile दम्पतीले यो MLA को खर्च मा आईवीएफ को बनाउन सक्छ। यो धेरै अपुताली परिवार आशा कि जस्तो हुनेछ। तर सबै undertakings जस्तै, यस्तो परियोजना अझै पनि केही शोधन आवश्यकता छ। उदाहरणका लागि, व्यवस्था मा रूसी नागरिक प्रजनन विशेषज्ञता कुनै क्लिनिक जाने र MLA को वित्तपोषण मा हुन्छन्, तर यहाँ अझै अनुमोदित छैन यी क्लीनिक को सूची नै हो सक्छ भनेर संकेत गरेको छ। निस्सन्देह, आईवीएफ OMC द्वारा - यो शायद धेरै परिवारहरूको लागि मात्र मौका छ। तर आईवीएफ CHI बनाउन कसरी प्रश्न खुला रहेको छ। यो प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, बिल मा दर्ता छ, तर वास्तविकता यो भन्दा बढी एक वर्ष हुनेछ। कार्यक्रम अन्तर्गत, महिला वा दम्पतीको त्यसपछि चिकित्सा को एक पाठ्यक्रम किन पत्ता लगाउन एक व्यापक परीक्षा पार गर्न एक निदान "निष्फलता" प्राप्त, र गर्नुपर्छ। अनि बस उपचार विफलता, आईवीएफ दिशा प्राप्त पक्का बनाउने। सारा प्रक्रिया 2-3 वर्ष लाग्न सक्छ, र निष्फलता को मुद्दा हरेक हप्ता एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। 25 वर्ष को उमेर मा बालिका अझै पनि बायाँ केही समय छ भने र, जसको जन्ममा अवधि सिद्धिनै लागेको छ, विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ स्त्रीले आईवीएफ कार्यक्रम कि थाह र CHI अनुदान लागि अवस्था के-के हुन्। बिल अनुसार, OMS मा आईवीएफ फाइदा लिन क्रम मा, "निष्फलता" को एक निदान संग एक महिला संग आवश्यक छ अर्क, पासपोर्ट र बीमा नीति कुनै क्लिनिक प्रजनन लागू हुन्छ। निस्सन्देह, संस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना गर्न हुनुपर्छ। सबै कागजातहरू क्रममा छन् र, क्लिनिक उपचार, उपचार पछि छैन पछि एक भन्दा महिना सुरु गर्नुपर्छ आवश्यक परीक्षा पास गरेका प्रदान। कसरी CHI मा आईवीएफ सम्पूर्ण प्रक्रिया हुनेछ केवल अभ्यास हुनेछ। कुनै पनि मामला मा, आईवीएफ कार्यक्रम MLA समावेश छ भनेर नयाँ कानून, स्वास्थ्य बीमा सिस्टम लागि अगाडि एक ठूलो चरण हो। साथै, कार्यक्रम अपुताली सुन्ने, अन्तमा, आफ्नै घर छोराछोरीको हास्य घण्टी दिइरहेको छ। रूसी परिवारलाई एक विशाल संख्या लागि साँचो आशा दिन्छ
किन कागति पात बन्द गिर?
अपार्टमेन्ट मा सिट्रस खेती कुनै आश्चर्य छ - तिनीहरूले जस्तै सजावटी बोट सेवा छैन, तर पनि बाली मालिकको खुसी पार्न। सायद सबैभन्दा लोकप्रिय बिचित्रको कागति भन्न सकिन्छ। यो वनस्पति संसारको कुनै पनि सदस्य जस्तै, यो कहिलेकाहीं malaise रूख महसुस - पातहरु को कागति देखि पतन र कुन यस मामला मा के गर्न छन् किन हेर्न । कागति को पात गिरने - एक कारण हेरचाह गर्न गृह कागति पात खस्छ भने यो अर्थ असुविधा गतिवान कुनै कारक। रूपमा चाँडै तपाईं वातावरणमा परिवर्तन र बोट हेरचाह छ के सोच्न आवश्यक छ। कागति पात खस्छ किन मानक कारण एक नम्बर छन्: ड्राफ्ट र सामान्य देखि कम वा उच्च गर्न अचानक तापमान परिवर्तन। Optimally गर्मी मा 17 सेल्सियस जाडो महिना मा हावा कायम र 22 ° सी यो तातो गर्मी मौसम वा ताप मा उदाहरणका लागि चिस्यान, पनि रोग एक एजेन्ट Provocateur रूपमा सेवा गर्न सक्छन्। अधिक-कनस्तर एक कागति लागि विपत्तिजनक हुन सक्छ। कागति रूपमा अतिरिक्त मल मा नकारात्मक प्रतिक्रिया करते। कागति, पात खस्छ किनकी जो अर्को कारण आकस्मिक परिवर्तन मा निहित। यो कागति तनाव कोठा, आदि मा एक सेटेलाइट संग एक darkened अन्तरिक्ष मा प्रकाश सामान्य rearrangement हुन सक्छ लागि कागति मूल कारखाना वृद्धि लागि डिजाइन ठूलो बर्तन, मा लगाए किन छ जो transplant, को पात पर्नु सक्छ। कागति पात गिरने - किरा को कारण यो कागति पात पहेंलो बारी र क्षतिग्रस्त बिस्तारै बन्द गिर भने सबैभन्दा अवस्थामा, माथि कागति मामला रोगहरु वा किरा संभावना छ, तिनीहरूको उपस्थिति गुमाउन दिँदै बिना, चाँडै पात खस्छ। चिसो मौसम समयमा अत्यधिक छिडकाव Fungi र जीवाणु एक मध्यम कागति प्रसार हुन्छ - पातहरु परिणामस्वरूप Rot गर्न सुरु। किरा यस्तो warts, विभिन्न प्रकृतिका स्पट, पात तन्तु ruptures रूपमा धक्का र growths संकेत गर्छ। समय, बिरामी पात गिर। कागति पात खस्छ - के के ?
तिनीहरूलाई एक - कुनै पनि सुशील दराज को आधार केही आधारभूत तत्व, र राम्रो cardigan सधैं छन्। 2013 मा cardigan, फैशन बुना, लगभग निश्चित एकभन्दा बढी मौसम लागि सान्दर्भिक हुनेछ। विशेष गरी तपाईं शास्त्रीय शैली र रोकी रंग को एक उच्च-गुणवत्ता मोडेल छनौट भने। यस लेखमा हामी महिला Cardigans कुरा हुनेछ -। लामो र छोटो, बुन्नु र बुना कपडा देखि सिलना फैशन महिलाहरु Cardigans 2013-2014 यो वर्ष, फैशन डिजाइनर को महिला विकल्प को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान। यो catwalks मा मोडेल को एक किसिम संग प्रस्तुत गरिएको छ -। सुस्पष्ट बान्की र जातीय प्रिंट studs, rivets र धारियों गर्न रोमान्टिक बुना cardigan पस्टेल देखि परम्परागत गिरावट रंग अलावा - खैरो, खैरो, नीलो, बुरगुण्डी, कालो र सेतो, फैशन डिजाइनर को संग्रह मा, Cardigans प्रस्तुत उज्ज्वल छाँटो र बिना विभिन्न Shades संग धेरै contrasting रंग र मोनोक्रोमसमावेशगर्दछ मोडेल जोडती थिए। बुना cardigan 2013 बनावट हुन सक्छ एक्सप्रेस रेखाचित्र बिना, (बुना-फोस्रो) र चिल्लो। विशेष प्रभावशाली पहिलो विकल्प जानाजानी ठूलो मोडेल मा देखिन्छ। मुख्य रुझान मा Cardigans 2013 फैशन छन्: क्लासिक, oversayz, पुरुष शैली, जातीय शैली, futurism, सेना, minimalism, ग्रञ्ज र रक । कुनै पनि अन्य कपडे रूपमा एक cardigan लगाउने सक्षम हुनुपर्छ। अनि सबै माथि, यो रंग र शैली को सही चयन बुझाउँछ। तपाईं मिल्दो कि रंग निर्धारण गर्न, आफ्नो उपस्थिति विचार र तपाईं एक "न्यानो" वा "चिसो" प्रकार छन् कि पत्ता। यो, लुगाफाटा वा सामान को रंग को विकल्प, सबै को पहिलो असर गर्नेछ। "न्यानो" संग girls अधिक अनुकूल न्यानो Shades र रंग देखिन्छ, र जसको उपस्थिति ती को "चिसो" प्रकार बुझाउँछ -। क्रमशः चिसो सजिलो बाटो तपाईं रंग फिट कि बाहिर आंकडा - यो कुरा सामना गर्न र दर्पण मा ध्यान विचार गर्न। ज्योति धेरै दृढता धारणा प्रभावित, त्यसैले यो प्राकृतिक डेलाईट यो गर्न सबै भन्दा राम्रो छ भनेर नोट। साथै, रंग आफ्नो लुगा अन्तर्गत फिट हुनुपर्छ। सधैं यो आफ्नो शैली र कति कुराहरू छन् उपलब्ध तपाईं फिट बस््छ कसरी राम्रो लाग्छ नयाँ कुराहरू खरीद गर्दा यो supplemented सकिन्छ। अन्यथा, पनि सबैभन्दा सुन्दर नयाँ पोशाक सक्छन् र कोठरी मा सबै जीवनको लागि ह्याङ्आउट - तपाईं यसलाई धारण गर्न केही छ बस किनभने । रंग को परिभाषा भएपछि, फैशन मोडेल ध्यान। मध्यम र उच्च वृद्धि को बुना लामो cardigan फिट केटी। कम बालिका अन्यथा यो आंकडा disproportionately लाग्न सक्छ, मात्र एडी वा मंच जूता संग संयोजन तिनीहरूलाई लगाउने सक्छन् (खुट्टा छोटो र वृद्धि लाग्न हुनेछ - कम)। तिनीहरूले नेत्रहीन केही किलो मालिक थप्न भएकोले बालिका को पूर्ण, विशेष साँघुरो ठूलो बुना आइटम, लगाउने प्रोत्साहित छैन। के तपाईं, तपाईंको खुट्टा को आकार जस्तै बटन बिना लम्बी ढाँचा cardigan ध्यान छैन भने। धेरै राम्रो तिनीहरूले तंग जीन्स, मिनी-स्कर्ट र कपडे संग हेर्न। cardigan व्यवहार गर्न कसरी?
लामो महिला टी-शर्ट
यो लकर कोठा केही उज्यालो शर्ट मा हुनेछैन जसले एक महिला पाउन गाह्रो छ। कपडे यी वस्तुहरू खेल र आकस्मिक को शैली मा पूर्णतया फिट, त्यसैले तपाईं धेरै दैनिक कुराहरू तिनीहरूलाई लगाउने सक्छ। हाल लोकप्रियता को धेरै लामो महिला टी-शर्ट प्राप्त। मानक मोडेल विपरीत, आफ्नो लम्बाइ र यो नितंबों को बीचमा, र पनि कम गर्न पुग्यो। अधिक महिला tunic जस्तै, मध्य-जांघ पुग्न केही मोडेल। अपवाद एक बाहुला र एक मुक्त silhouette कुराहरू बचाउँछ। लामो महिलाहरु Mikey यस्तो गहिरो संलग्न गर्नुभयो कहाँ?
गायिका बन्न कसरी?
लगभग हरेक केटी एक विशाल चरण मा आफूलाई शुरू, एक कोर्नु सट्टा एक माइक्रोफोन संग गाउँछन् गर्न प्रेम, तर धेरै लागि, सपना बाहिर कहिल्यै थियो। अन्य कुनै कुरा के, आफ्नो लक्ष्य गर्छन। तर एक गायक बन्न कसरी, उनीहरूले धेरै छैन थाहा, के गर्न आवश्यक छ। मुख्य कुरा आफूलाई विश्वास र सही दिशा मा सार्न। कसरी प्रसिद्ध गायक बन्न?